Puntland oo joojisay shir xukuumadda Soomaaliya ku qaban laheyd Garoowe – Somali Top News
Gelinkii dambe ee shalay oo Axad aheyd ayaa waxaa Magalada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal shir ku qaban lahaa Wasiirka Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo Garoowe loogu doortay Xubin Baarlamaan,balse Maamulka Puntland uu joojiyay.
Shirkaas ayaa waxaa ka qeyb geli lahaa Gudoomiyaha Gudiga Madaxa Banaan ee Doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Yarey iyo Cabdiqani Cabdi Jaamac oo Wasiir kasoo noqday Jubbaland, balse hadda ah lataliyaha Ra’iisul Wasaare Kheyre.
Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali (Qarjab) ayaa ku sheegay sababta ay u joojiyeen shirkaas in weli xiriirkii Puntland iyo Dowladda Federaalka Soomaaliya uu yahay mid go’an oo aan wanaagsaneyn.
Kulanka oo uu ka qeyb geli lahaa Wasiirka Qorsheynta Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid ah su’aalo ku weydiin lahaayeen ardayda jaamacadaha Puntland,iyada oo lagu qaban lahaa Jaamacada PSU, waxaana looga hadli lahaa waxqabadka xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirka Jamaal Maxamed Xasan weli dahnkiisa kama hadlin qorshaha Puntland ay ku joojisay kulankaas.
← Why Somaliland Declares that she is Ready to Negotiate With Somalia?
Koox hubeysan oo wiil dhalinyaro ah ku dishay magaalada Gaalkacayo →
Musharxiinta Koofur Galbeed oo kulan la qaatay Gudoomiyaha golaha shacabka
Madaxa Xukuumadda Galmudug oo taageeray baaqii Madaxweyne Farmaajo